Binary Options ကို၏အခြေခံ | အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုမဟာဗျူဟာ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ကျနော်တို့မကြာခဏမေးမွနျးရ: binary options များကဘာတွေလဲ? binary options များဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ငွေရှာဖို့ရေပန်းစားနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့သူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရိုးရာ options များ, သူတို့ရဲ့ငွေဖြစ်လွယ်, ဆုလာဘ်များနှင့်အန္တရာယ်များအဖြစ်ဆုကြေးငွေကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှကုန်သည်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင်းအွန်လိုင်းပွဲစားများမှရိုးရာရွေးချယ်စရာကျေးဇူးတင်စကားနှိုင်းယှဉ်ကုန်သည်များကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုသောမည်သည့်ကုန်သည်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အန္တရာယ်များနှင့်အလားအလာဆုလာဘ်နားလည်ရပေမည်။ ဒါဟာဒွိ options များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့မဟုတ်တိုင်းကုမ္ပဏီ legit ကြောင်းကိုနားလည်ရန်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ထိပ် binary options များပွဲစားများအချို့ကိုယနေ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဒီ site ကိုဖန်တီးပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
binary options များမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးကအသေးစိတ်ဥပမာ
ဘယ်လိုတဦးတည်းထိတွေ့ binary options များအရောင်းအလုပ်မလုပ်
ဘယ်လိုအကွာအဝေး binary options များအရောင်းအလုပ်မလုပ်
ကမ်ဘာပျေါတှငျကွဲပြားခြားနားသောဒေသများကနေ binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်
အမေရိကန်နှင့် Non-အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင် binary options များကုန်သွယ်နှိုငျးယှဉျ
binary options များကုန်သွယ်၏ကောင်းကျိုးများ
binary options များကုန်သွယ်၏ဆိုးကျိုးများ
မကြာခဏထူးခြားဆန်းပြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအောက်မှာခွဲခြား ထို binary option ကို အဆိုပါပြန်မှာအားလုံးတစ် fixed ငွေပမာဏသို့မဟုတ်ဘာမျှမဖြစ်စေများမှာဘယ်မှာဘဏ္ဍာရေး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်, အ fixed ငွေကြေးဆိုင်ရာပြန်လာ $ 100 ဖြစ်ပါတယ်။ binary options များသည်သင်တို့ထံကအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေဘယ်မှာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များအားဖြင့်သွားပါ။ အမည်များကို fixed ပြန်လာရွေးစရာများ (အမေရိကန်), အားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမျှ options နဲ့, ဒစ်ဂျစ်တယ် options များပါဝင်သည်။
binary options များကိုဖော်ပြရန်နောက်ထပ်လမ်းကိုသူတို့လည်ပတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ binary options များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းငွေပေးငွေယူနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ကုန်သည်တစ်ဦးဘဏ္ဍာရေးတူရိယာစျေးနှုန်းရွှေ့မည် speculates ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. အဘယ်သူမျှမအဆိုပြုအပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါကုန်သည်ရိုးရှင်းစွာသူတို့မေးခွန်းကိုဖြေဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးဝယ်ယူစေ (ခေါ်ပါ) သို့မဟုတ်ရောင်းချရန် (ထား) ဦးမည်:
အဆိုပါကုန်သည်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်ဟု speculates လြှငျ, ဖုန်းခေါ်အောင်လာမယ့်ခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကုန်သည်စျေးနှုန်းတစ်စက် speculates လြှငျ, သူသို့မဟုတ်သူမတစ်ဦးထားထားပါလိမ့်မယ်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပေါ်၌မှန်ကန်သောထင်မြင်ချက်လုပ်သူကိုကုန်သည်များအမြတ်အစွန်းပါစေ။ သို့သော်မှားယွင်းစွာခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်သောသူတို့မူကားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်ရလိမ့်မယ်နဲ့မဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်အမြတ်အမြတ်ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်ငွေပြန်အမ်းငွေပမာဏသည်သင်၏ပွဲစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ binary options များကုန်သည်များသည်အဖိုးတန်သတ္တုများ, ငွေကြေးအားလုံး, ညွှန်းကိန်း, ကုန်စည်နှင့်စတော့ရှယ်ယာအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောတကမ္ဘာလုံးကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ခွင့်ပြုပါ။
သို့သော်မဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ် (ဂူးဂဲလ်တော့ရှယ်ယာဝယ်ယူဥပမာ) ကိုနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ယူခြင်းထက်, သင်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုအပေါ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 10 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင်လက်ရှိ $ 500 မှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သော S & P 1430 အညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်မှုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ မတူညီသောဇယားနှင့်နည်းပညာ tools တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးနောက်သင်စျေးနှုန်းလာမည့်နာရီအနည်းငယ်ကျော်မြင့်တက်သွားကြောင်းကောက်ချက်ချ။ သို့သျောလညျးသငျသညျဘယ်လောက်ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ သို့ဖြစ်. ခေါ်ဆိုမှု (ဝယ်) နေရာဆုံးဖြတ်။
အဆိုပါပွဲစား5မိနစ်ကနေ 1 တစ်လအထိအများအပြားသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလကမ်းလှမ်းပြီးကတည်းက, သင် 10 မိနစ်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုအနေအထားကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်။ ဒါက 10 မိနစ်အကြာတွင် S & P 500 အညွှန်းကိန်း၏စျေးနှုန်း $ 1430 ကျော်ပါလျှင်, သင်ကအမြတ်အစွန်းစေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အနိမ့်ရဲ့အလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သင့်အကျိုးဆောင်သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (အမြတ်) အပေါ်တစ်ဦး 70% ဝင်ငွေလိမ့်မယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
သင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာအပေါ် မူတည်. သင် (ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်သင်၏စုစုပေါင်းအကောင့်တန်ဖိုး 100% နှင့် ပတ်သက်. အကြံပြု) ကိုကုန်သွယ်ရေးအပေါ် $2ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးထိုအချိန်တွင် S & P 500 အညွှန်းကိန်း၏စျေးနှုန်း $ 1432 ဖြစ်ပါတယ်။ $2တစ်ခုတိုး။ ဤသည်သင်တစ်ဦး $ 70 အမြတ်အစွန်း ($ 70 ၏ 100%) ဖန်ဆင်းသောဆိုလိုသည်။ သို့ဖြစ်. $ 170 နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုအကောင့်။
သငျသညျအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူးကတည်းက S & P2အညွှန်းကိန်း၏စျေးနှုန်းအတွက် $ 500 တိုးသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းမရကြောင်းသတိပြုပါ။ သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏအပေါ်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ S & P အညွှန်းကိန်းစျေးနှုန်း $ 1429 ကျဆင်းသွားလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, သင်သည်သင်၏ $ 100 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာစျေးနှုန်း $ 1430 မှာကျန်ရစ်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကသင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ $ 100 ပြန်အမ်းမယ်လို့ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဒီဥပမာရိုးရှင်းတဲ့အမြင့်ဆုံး / အနိမ့်ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်မှုဖော်ပြသည်။ ယနေ့ပွဲစားများမကြာခဏတဦးတည်း touch နှင့်အကွာအဝေးပါဝင်သည်အခြားထူးခြားဆန်းပြား options များအရောင်းအကိုဆက်ကပ်။ ဤတွင်အသီးအသီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းအတိုချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကဥပမာကိုသုံးပြီး, တဦးတည်းထိတွေ့ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို S & P 500 စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုလိုအပ်သည့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလမတိုင်မီကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းအဆင့်ကိုမထိရပေမည်။ သငျသညျအများအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုစျေးနှုန်းအဆင့်ဆင့်, လက်ရှိစျေးနှုန်းအထက်တဦးတည်းကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦးနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။
သို့တိုင် $ 500 ၏ S & P 1430 လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုအသုံးပြုပြီး, သင့်ပွဲစား $ 1400 နှင့် $ 1460 အကြားစျေးနှုန်းအကွာအဝေးသည်ပေလိမ့်မည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်သင်စျေးနှုန်းတဲ့အတွက်မနေ့တုန်းကဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကကျဆင်းနေစတင်သည်မီ, က $ 1437 hit သင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။ သင်တို့သည်လည်းသူက 1437 မိနစ်အတွင်း $ 150 hit လိမ့်မည်ဟုကောက်ချက်ချ။
တ-touch နဲ့ကုန်သွယ်ရေးအသုံးပြုခြင်း, သင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့စျေးနှုန်း $ 1437 သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းမှာအဆင့်နှင့် 150 မိနစ်တစ်ခုသက်တမ်းကုန်ဆုံးထားပါ။
စျေးနှုန်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလမတိုင်မီ $ 1437 ရောက်ရှိလျှင်, သင်အမြတ်စေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူက $ 1437 ရောက်ရှိဘယ်တော့မှ အကယ်. သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. , အကွာအဝေးအကြံပြုအဖြစ် binary options များအရောင်းအ သင်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစျေးနှုန်းအချိန်တိကျတဲ့ငွေပမာဏအဘို့အအတွင်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်မျှော်လင့်ထားရသောအတွင်းတိကျတဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးမှနျးဖို့ခွင့်ပြုပါ။ စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေး၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးပေါ်မှာရွေးချယ်ထားသည့်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်နေဆဲပါလျှင်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့ကြသည်။
အပေါ်ကဥပမာကိုသုံးပြီး, အကွာအဝေး 1430 မိနစ်အတွင်း $ 1437 နှင့် $ 150 အကြားပါလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်း $ 1430 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်သို့မဟုတ် $ 1437 အထက်မြင့်တက်လာပါက, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, ထူးခြားဆန်းပြား binary option ကိုအရောင်းအမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုနှင့်အတူ လာ. မြင့်မားသော / အနိမ့်အရောင်းနှိုင်းယှဉ်အလားအလာဆုချ။ ဂန္မြင့်မားသော / အနိမ့်အရောင်းအ 50% နှင့် 85% အကြားပြန်ပူဇော်နေစဉ်, ထူးခြားဆန်းပြားအရောင်းအထိ 500% ၏ပြန်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မားပြန်လာသင်သည်အခြားအရောင်းအပေါ်ခံရစေခြင်းငှါ, ဆုံးရှုံးမှုကိုဖုံးလွှမ်းရန်လုံလောက်သောအမြတ်အစွန်းစေရန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သျောလညျး, သငျပေးရဆုံးရှုံးမှုအလားအလာအမြတ်အောင်၏ထက်များသောအားဖြင့်မြင့်မားပြီးကတည်းကလက်တွေ့မမြင့်မားပြန်ပူဇော်ကြောင်းအရောင်းအဝင်သည့်အခါသတိထားပါရန်အကြံပြုပါတယ်။
သင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော binary options များအကျိုးဆောင်များအတွက်န်းကျင်စျေးဝယ်ခဲ့လျှင်သင်အချို့သောပွဲစားတိကျသောဒေသများထံမှကုန်သည်များငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ ဒီအကြောင်းပြချက် binary options များပွဲစားများတိကျတဲ့နိုင်ငံများ၏နိုင်ငံသားများ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ဖို့လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အတော်များများက binary options များပွဲစားများအမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှအားပြိုင်မှုများကစွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ငွေပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) 2013 အတွက်တရားမဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ Binary options များရောင်းချများအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်အခြေစိုက်ပွဲစားစွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ငွေ။ အလားတူကုမ္ပဏီတခုကိုလည်းယင်း၏ထိန်းညှိ CySEC အားဖြင့်ဒဏ်ငွေခဲ့သည်။
တစ်ဦး binary options များအကျိုးဆောင်ရွေးချယ်ခြင်း, ဒါကြောင့်, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်အိမ်တိုင်းပြည်နှင့် binary options များကုန်သွယ်ထိန်းညှိသောဒေသခံဥပဒေများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာအမှန်တကယ် binary options များပိတ်ပင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဒါဟာအစသင်ပွဲစားသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များကလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ စည်းမျဉ်းဥပဒေကသင်၏ရန်ပုံငွေများအာမခံထားဖြစ်ကြောင်းသေချာနှင့်အရှင်လိမ်လည်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သင်၏ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆန့်ကျင်သငျသညျကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်။
US မှာ binary options များကုန်သွယ်အကြီးအကျယ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ Binary options များပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ပွဲစား Securities and Exchange Commission (SEC) သို့မဟုတ် Commodities Futures Trading ၏ကော်မရှင် (CFTC) ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြင်ပကနေထိုကဲ့သို့သောအနည်းငယ်ပွဲစားများအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်အဖြစ်။
အမေရိကန်ပြင်ပမှာ binary options များကုန်သွယ်လည်းအကြီးအကျယ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နေဆဲလိုင်စင်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ကြောင်းပွဲစားများရှိမတည်ရှိ။ ရေတွင်းလူသိများထိန်းညှိအလောင်းအချို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ် Securities and Exchange Commission (CySEC) နှင့်သြစတြေးလျ Securities မှနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (ASIC) တို့ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံများကဲ့သို့သော
ဣသရေလအမျိုးနှင့်ကနေဒါ binary options များကုန်သွယ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ binary options များပုံမှန်အား byexchanges ပူဇော်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားရိုးရှင်းစွာရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်မှုဘယ်မှာဆန္ဒရှိဝယ်နှင့်ရောင်းချသူတွေ့ကြံနေတဲ့ပလက်ဖောင်းကိုပေး။ ဖလှယ်မှုထဲသို့ဝင်သည်ကိုကုန်သွယ်ရေးအပေါ်သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေအားသွင်းခြင်းဖြင့်ငွေရှာ။ US မှာ operating နာမည်ကျော်ဖလှယ်မှုများ၏တဦးတည်း Nadex ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ CFTC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြင်ပမှာ, binary options များများသောအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီပွဲစားများကကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ပွဲစားများသူတို့အရောင်းအနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့အရောင်းအဆုံးရှုံးအပေါ်နုတ်အနိုင်ရတဲ့အပေါ်ထွက်ပေးဆောင်သောအရာကိုအကြားတစ်ဦးရာခိုင်နှုန်းကွာခြားချက်တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာ။ တချို့ကပွဲစားများလည်းအရောင်းအများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကုန်သည်အကောင့်ပေါ်တွင်အခကြေးငွေနှင့်ကော်မရှင်များအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။
ရှိသမျှသောလောကီဒေသများတွင်ပွဲစားများနှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ binary options များ၏စျေးနှုန်း 1 နှင့် 100 အကြားကိုးကားထားပါသည်။ ဤသည်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်မှုကာလတစ်လျှောက်လုံး fluctuates ။ စျေးနှုန်းအတက်အကျကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်အမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးဝင်ငွေစေဘာတွေလုပ်နေလဲ။
ဒါ့အပြင်ကုန်သည်များအမြဲမသက်ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ပွဲစားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကုန်သွယ်မှု၏အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံးအလားအလာသိကြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအမြတ်နဲ့အရှုံးအသီးသီး $ 100 နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏမှာအဖြစ်သို့ပေးနေကြသည်။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအတော်များများဖလှယ်မှုနှင့်ပွဲစားများလည်းကုန်သည်များအမြတ်အစွန်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်နီးစပ် minimize လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါအထူး tools များဆက်ကပ်။ ဤရွေ့ကားမှတ်တိုင်များနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလမတိုင်မီကုန်သွယ်ရေးမှထွက်ရန်စွမ်းရည်များပါဝင်သည်။ တချို့ဖြစ်ရပ်မှာပွဲစားကရှေ့တော်၌ကုန်သွယ်ရေးမထွက်ဘို့သေးငယ်တဲ့ကြေးနုတ်စေခြင်းငှါ,
binary options များကုန်သွယ်၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာသင်ကအလားအလာအမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးကိုသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ တိုင်းကုန်သွယ်မှုများသောအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုအလားအလာရလဒ်များရှိပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးအောင်မြင်လျှင်, သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အမြတ်ဝင်ငွေလိမ့်မယ်။ ကုန်သွယ်ရေးအောင်မြင်သောမပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအမြတ်အစွန်းအလားအလာဆုံးရှုံးမှုအလားအလာထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်အဘယ်မှာရှိအရောင်းအသိရှိနိုင်ဖို့လွယ်ကူစေသည်။
နောက်ထပ်အားသာချက်အများအပြားပွဲစားများထဲသို့ဝင်အရောင်းအပေါ်မည်သည့်ကော်မရှင်သို့မဟုတ်အခကြေးငွေကောက်ခံမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်တတ်နိုင်သလောက်သင်ရရှိသည့်ဝင်ငွေအဖြစ်တာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော်ပွဲစားများဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အရောင်းအပေါ်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်ကော်မရှင်များစည်းကြပ်ပါဘူးတဲ့ပွဲစားကိုရွေးချယ်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်ခြားနားသည်။ တချို့ကပွဲစားများကိုပင်သင်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုအားဖြင့်စွဲချက်တင်ခံရအံ့သောငှါအရောင်းအဝယ်အခကြေးငွေကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်
Processor ကိုသင့်အကောင့်ထဲကနေရန်ပုံငွေ depositing သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာလာသောအခါ။
binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်လည်းအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စျေးနှုန်းတိကျတဲ့အချိန် span ကျော်မြင့်တက်သို့မဟုတ် drop သွားရှိမရှိမှနျးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး binary options များကုန်သည်အဖြစ်, သင်သည်ဤငွေပမာဏထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိမယ့်ထားတဲ့တူရိယာပါဝငျကွောငျးကုန်သွယ်ရေးအပေါ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 1 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူးကတည်းကအဘယ်သူမျှမငွေဖြစ်လွယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်။
အတော်များများက binary options များပွဲစားများ, ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်သင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများထွက်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူစေအသုံးဝင်သောကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာလာနှင့်အ, သူတို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ binary options များကုန်သွယ်သင်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင်ရရှိနိုင်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတန်းမှ access ကိုပေးသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်အဖြစ်ကိုသင်ဖွင့်လှစ်မယ့်ဆိုဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
binary options များကုန်သွယ်၏အဓိကအားနည်းချက်များတစ်ခုမှာတစ်ခုတည်းအရှုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အကြိမ်ကြိမ်အနိုင်ရအရောင်းအလိုအပ်အံ့သောငှါဖြစ်၏။ အများအပြားဆုံးရှုံးအရောင်းအမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုကုန်သွယ်အကောင့်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးသက်သေပြချက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ကုန်သွယ်ရေးမဝင်ခင်တိကျတဲ့တူရိယာရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သို့ဖြစ်. အရေးကြီးပါတယ်။ နှင့်သင့်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာထွက်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူသောလမ်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအန္တာရာယ်ရန်မလိုပါတဲ့သရုပ်ပြအကောင့်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြင်ပမှာ operating အတော်များများပွဲစားများကိုစည်းကမ်းတဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပွဲစားနှင့်သင်၏ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအာမခံထားကြောင်းအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင်ဂရုတစိုက်သူတို့နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်မီတပွဲစားသုတေသနကြောင်းအကြံပြုသည်။
binary options များကုန်သွယ်နေတဲ့ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များက fixed ပြန်လာဝင်ငွေမှတစ်ဦးလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးများထဲမှင်
ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်နည်းလမ်းများ။ အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမှရွေးချယ်ဖို့အများကြီးပွဲစားများနှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့အားပြိုင်မှု legit ပွဲစားများတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိလိုင်စင်နှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်လိမ်လည်မှုပွဲစားများအနေဖြင့်ကုန်သည်များအားကာကွယ်ရန်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုစေပြီ။ သို့သော်အမေရိကန်ပြင်ပမှာ operating စည်းကမ်းတပွဲစားများ၏အရေအတွက်သည်မြင့်မားသောနေဆဲဖြစ်သည်။
binary options များအတွက်ထရေးဒင်းအနိမ့်မြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုစတင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းပါဝင်သည်အများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါဝငျကွောငျးကိုအခြားဈေးကွက်နှင့်ဝသကဲ့သို့, binary options များကုန်သွယ်အချို့အန္တရာယ်များပါဝငျသညျ။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းရှုံးနိမ့ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အကြိမ်ကြိမ်အနိုင်ရအရောင်းအမလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ဒါတောင်မှအများအပြားကုန်သည်များသက်သေကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများချမှတ်နှင့်ရရှိနိုင်အကျိုးဆောင်ပေး tools တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာငွေရှာနေကြသည်။
သငျသညျထို binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ချင်လျှင်, သင်တို့ကိုပထမဦးဆုံးဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်. အကောင်းတစ်ဦးနားလည်မှုရှိသည်နှင့်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပွဲစားကိုရှာတှေ့ဖို့အချိန်ယူအရေးကြီးပါတယ်။
Tags: binary options များအကောင့်, binary options နဲ့ Forex ကုန်သွယ်, binary options များအကောင်းဆုံးညွှန်းကိန်း, ထို binary options များပွဲစားများ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များ, ထို binary options များဗျူဟာ, ထို binary options များကုန်သည်, ထို binary options များကုန်သွယ်, တစ်ဦး binary options များမဟာဗျူဟာကဘာလဲ, တစ်ဦး binary options များကုန်သည်ကဘာလဲ